Izatifikethi ezixabisekileyo kakhulu kwiNkcazo yokuKhenketha | IYO
Eyona ndlela, i-slip-ups ayinakuze yenzeke. Ukukrakra, oko kungengqiqo, ngakumbi kwindawo yokunxibelelana. Kukho nawuphi na, xa uzisa ubuchule kwi-mish-mash jikelele, uquka uluhlu lokhuseleko! Ukugqithisa ukuvumela ukuyila isakhelo, isikhokelo sokusebenza, izixhobo, nokunye ukuvavanya nantoni na into ngaphandle kokurhweba kwisikhokelo samanje okanye ukuthenga isicwangciso esitsha esincinci esingenakusebenza ngaphezu kwexesha elide.
Isikhundla sokuzama izinto ezintsha asiyikukhusela ukuthembeka kwesakhelo sakho samanje ngokungezelela ukwandisa ubuchule bakho njengombutho. Singaqhubeka ixesha elide malunga nendlela yokwenza okungaqhelekanga ngayo, kodwa siya kushiya oko kuVMware.
Ixesha lokufumana ubungqina bemiSebenzi yokuKhenketha
Izatifikethi ziyinxalenye eyisiseko kwanoma yimuphi umsebenzi weenkwenkwezi ze-IT. Zikunceda ukuba uqale ngamantongomane kunye neebhontshini kwaye uziqhubele phambili kwi-specialization, ngokukodwa ngokuqhubela phambili okwenziweyo. Naluphi na ukuphendulela khona, ukusetyenziswa kwamagunya kusetyenziswe kwiinkalo ze-IT, ukwenza izatifikethi ezihambelana kakuhle.
Izatifikethi oza kuphumelela ngazo zizahlula ngokungafaniyo kwiziko kunye nekhono lobuchule.
Akukho mveliso enkulu yokuqinisekiswa kokuqinisekisa ngaphandle, nangona kunjalo ingaba iindaba eziphakamisa. Imilinganiselo enkulu yemfihlelo malunga nokuqinisekiswa kwee-certificates iphela xa unentsimi encinci yezinye iindlela. Vumela izinto ezisetyenziswayo ngokwenene (okanye kufuneka uzisebenzise) ziqondise ukhetho lwakho lweziqinisekiso kunye neemfuno. Nayi inxalenye yezikolo ezifanelekileyo eziza kulandela kwizinto eziphezulu kwiindawo eziphezulu.
Ngokucacileyo, ubuvulindlela bezoshishino kwiziqinisekiso zobungqina beVMware. Kukho iinxalenye zezatifikethi ezinikezelwa ngabahlobo bethu kwi-VMware, nangona kunjalo ukhetho lwethu oluphezulu (ngokunenzuzo ngokwaneleyo) lukhetho lwabo olukhethileyo.
Ngethuba lokuthi kufuneka usebenze ngendlela yakho ukuya kwii-VCP-level certifications, qalisa ngeZiseko ze-XSUMX. Oku kukuqinisekisiwe ukufikelela kwi-VMware kwaye ngokuqinisekileyo kulungelelaniswa kungakhathaliseki ukuba ixesha lakho lukunyuka ukukhawuleza ngeempawu zokufunda kunye nokufunda kwakho iimfuno kwiC cert yeVCP.
I-Data Center Virtualization (VCP6-DCV) isatifikethi sithola amabakala amahle ekunikeni ulwazi olufanele lujoliswe kwintsimi.
Kwakhona, sinaso isohlo lweVMware ukulungelelanisa iziqinisekiso ze-7 ezitsha kwindawo. I-VMware ayinikezeli i-v7 Data Centre eyi-Virt certalization ngoku, nangona sikulindele ukubona ukuba kungekudala.
I-networking juggernaut i-Cisco inikeza iifomati zokufaka izatifikethi ezibandakanya kwaye zizuze ngokwenza ubuchule kunye nolwazi.
* Kucelwa uqaphele ukuba iCisco injengoku ngoku guqula inani elikhulu leemviwo zokuqwalasela idatha, ezinye zazo ziza kuhoxisa ngoJulayi 3, 2017.
I-Cisco Certified Networking Associate (CCNA) I-Centre yeZiko leNgcaciso yindawo yokwenza ubuchule buqala ngokwenene kwiCisco. Le cert ikubeka kwiNgcali kunye neZiko lokuQinisekisa kwizinga lobugcisa, ngoko cinga nje ngeqalo lakho lokuqala leCisco.
Isitifiketi seCisco Unified Computing Specialist sichaza isiseko seCisco Unified Computing System kwaye sivavanya amandla akho ekuqhubekeni kwimeko yesiCwangciso seDatha. Esi siqinisekiso sihamba ngendlela ye-dodo kungekudala. Iza kuhoxiswa ngoJulayi 4, 2017, ukuze udibanise kwisiganeko ofuna ukufumana esi siqinisekiso! Ngethuba lokuba awukwazi ukucinezela le nto ngaphambi kokuba ulahle, i-CCNP yedatha yeCentt cert yindawo echaziweyo.
Isiqinisekiso seCisco Certified Networking Professional (CCNP) seSikhungo seNgcaciso seZiko sineemviwo ezine kwaye sibuhlungu. Kukho izigqibo zovavanyo ezikuvumela ukuba ukhethe indlela eninzi ye-apropos ye-cert yakho, kwizinga elithile.
Indlela kaMicrosoft yokujongana nokulungelelaniswa kuxhomekeke kwintlangano yesikhokelo apho ungagcina uphawula amanethiwekhi, iiseva ezilawulayo, okanye ngaphandle kwezikhokelo zenkqubo. Kukho izatifikethi ezimbini okanye ezintathu eziza kukunceda udibanise i-sysadmin kunye nobuchule bokugqiba.
I-Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): I-Windows Server 2012 (okanye iWindows Server 2016) isatifikethi phakathi kweempawu eziphambili zeMicrosoft ze-aces ze-IT kwaye zikwazisa ngeWindows Server. Le cert iqulethwe iimviwo ezintathu, zonke ezingenayo i-notoriety for testing. Kwimeko nayiphi na into, i-spoonful yeeshukela ezinokukunceda le mayeza ukuba ahlawule kukuba i-MCSA ibalulekile kwi-Certification-level certification.
I-Microsoft Certified Certified Expert (MCSE): I-Platform yeNkcazo kunye neZibonelelo zeZibonelelo zijongana neendlela ezimbini okanye ezintathu eziphambili zeMicrosoft: i-Azure kunye neWindows Server. Ngaphantsi kwesakhiwo esitsha seSikethi seMicrosoft, unethuba lokukhetha iimviwo kwi-pool of choices, ekunika ithuba lokuguqula isatifikethi sakho. Ufumene i-MCSE ngokudlula umvavanyo omnye kuphela, kodwa ke kufuneka uthathe olunye uvavanyo ngokuqhubekayo ukuze kugcinwe isatifikethi sakho sesatifikethi kunye nesisemthethweni.
Izinto zeCitrix zivelele kwishishini le-IT, kwaye kwithuba elihle lokuba ugcine usebenza nalazo zinto, izatifikethi zeCitrix ziya kubaluleke kakhulu kuwe. I-Citrix ngumdlali wexesha elide kwisimo sokumisela kwaye unikezela izitifiketi ezintathu omele ugxininise kulo uphuhliso lwenzululwazi:
I-Citrix Certified Association - I-Virtualization (CCA-V)
I-Citrix Certified Professional - I-Virtualization (CCP-V)
I-Citrix eqinisekisiweyo yeCentrix-Virtualalization (CCE-V)
Ngayinye yala ma certs igxila kwi-Citrix yinto ehamba phambili, i-XenDesktop, ikuhambisa ngokulungelelanisa ulwazi kunye nolwazi lwezinto.
Linux sysadmins, zidibene kunye! Red Hat unikezela ukuqinisekiswa kokuqinisekiswa kobuchule obuncedo kakhulu kwi-sysadmins abangenakunxulunyaniswa nabathengisi abaninzi. Red Hat inikezela ngokubambisa iziqinisekiso, inani elikhulu elibandakanya ubuchule, nangona kunjalo i-cert enye ibonakala njengento ebaluleke kakhulu yokusebenza kwendlela yokuqeqeshwa.
The Red Hat Certified Certialization Administrator (RHCVA) i-cert ithumela i-Linux uqeqesho lwenkqenkquthela kwaye iqinisekisa ukuqonda kwakho kunye namandla okuthumela nokujongana nokusekwa kwesiseko, imikhosi kunye neendwendwe ezisetyenziselwa i-Red Hat Virtualalization. I RHCVA Ukwabeka ngokukhawuleza ukufuna i-Engineer-kunye ne-Architect-level certifications.
Kubalulekile ukuba ungalokothi ungene ngqo endleleni ukuze uqiniseke. Thatha isihlalo, uphando malunga nokufikeleleka, kwaye uqaphele oko kuza kulungelelanisa iimfuno zakho. Iziqinisekiso ezimbalwa ziza kumanqanaba okuguqula amandla, ezifuna inkqubo edibeneyo egcinwe engqondweni ekujoliswe kuyo ukunyuka inyathelo. Ukwenza ilungiselelo lomdlalo kusenokuba lunokulondoloza ixesha kunye nobungakanani, kwaye siye safaka isitifiketi esifanelekileyo sokufumana usebenziso ngokusebenzisa ifu kunye nobuchule ngaphambili.
Izinto zifana noko zikunjalo, ngaba unokuthi uya kukhangela?
Yiyiphi incike kuyo: Umncedisi onokukwazi ukuqhuba isakhelo esisodwa sokusebenza? Okanye, ngakwesinye icala umncedisi oqhuba i-Hypervisor eyenza uomatshini obuninzi, ongagcina esebenza ngokubambisana kwezikhokelo zokusebenza ezizonke zilungelelaniso malunga neendleko ezingaphezulu? Ukhetho lwesibini luya kuba luncedo kakhulu kwaye luncedo kunoma yimuphi umbutho. Naliphi na umphathi oza kuvuyisa ukuxhaphaza ukulungelelanisa kunye neendleko ezifanelekileyo zokuqinisekisa ukuba isizukulwana sakho sizungeze.
Iminikelo yokuqinisekiswa esuka kwi-VMware, i-Cisco, iMicrosoft, i-Citrix kunye ne-Red Hat iya kukubonisa indlela yokulungisa isizukulwana sakho. I-VMware ekupheleni kwexesha ilahle izatifikethi ezimbini ezintsha kwi-VMware Certified Professional 7 ithrekhi, i VMware Certified Professional 7 - Ulawulo lweMnyama kunye nokuZenzeka (i-VCP7-CMA) kunye ne-VMware Certified Professional 7 - Desktop kunye ne-Mobility (VCP7-DTM) ukukunceda i-ace zayo izinto ezigqithisileyo.
Ukuthabatha isiphi isitifiketi esinokuyifumana emva kokuba sinokubangela ingxaki kodwa kunjalo ukwenza umgaqo apho izitifiketi ziya kukunceda kwaye uqeqesho lwakho luyakunceda uhlalutye umzila oza kukunceda ngokupheleleyo njengenkosi yomnatha. Inkqubo enye kukuqala ngezinto ozisebenzisayo emsebenzini. Vumela izinto ozilungeleyo ngoku usebenzisa isiqalo apho uqala khona, ngoko-ke yenza ukuba umdla wakho kunye nentshiseko ekuqhubekeni kwentsebenzo kuthathe isigqibo sakho sokuhamba.
Njengoko ubuchule kunye nokufakela ifu kuqhubeka nokuphuhliswa kwaye kuqhutyelwa ukunyuka phakathi kwimeko yakho, ingqiqo yakho ekuqinisekiseni ubuchule ayiyikukubangela ukuba ube luleke kwimibutho yakho, ngokungekho ukuvula ukungena kwiindlela ocinga ngazo.
Ubungqina buya kuhlala bukhula kunye okanye ngaphandle kwakho, kutheni ungabi yintonga?
Isimo esilungekileyo -Isihluthulelo sokufezekisa ubuNene boBungqina